Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem]
1 ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 30th May 2009, 7:51 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 6
တညျနရော : လှည်းတန်း
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-05-25
ကျွှန်တော်အိမ်ကစက်မှာဖြစ်နေတာပါ...။ Virus နံမည်ကတော့ Funny.exe ဆိုတာရယ် msi.exe ဆိုတာရယ်ပါ...။ Test manager ခေါ်ပြီးရင်တော့ end process လုပ်လို့ရပါတယ်...။ ဒါပေမဲ့အဲဒီနှစ်ခုအလုပ်လုပ်နေရင် CPU ကအတော်လေးကိုအလုပ်လုပ်ရတယ်...။ အဲဒီတော့စက်က window တက်တာလဲနှေးတယ်...။ ပြီးတော့ အဲဒီနှစ်ခုအနက်မှ Funny.exe ဆိုတဲ့ Virus ကစက်ရဲ့ Destop မှာ ပေါ်နေတယ်...။ File ကလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့...။ နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်...။ My computer ထဲမှာရော်ပဲ...။ ဒါပေမဲ့ My computer ထဲမှာကြတော့ Funny ဆိုတဲ့ file ကလေးက System file အနေနဲ့ပေါ်နေတာဗျ...။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီ file တွေကို delete လုပ်လို့မရခြင်းပါပဲ...။ အဲဒီ file ကလေးတွေအပေါ်မှာ right click နှပ်လိုက်ရင်တော့ creat shortcut ဆိုတာရယ် properties ဆိုတာရယ်နှစ်ခုပေါ်နေတယ်...။ သူကို Keyboard ကနေပြီးတော့ delete လဲလုပ်လိုမရဘူး...။ နောက်ပြီးတော့ run ထဲကနေ regedit ကိုလဲခေါ်လို့မရတော့ဘူး...။ Test manager မှာ run တဲ့ funny.exe နဲ့ msi.exe ဆိုတဲ့ process ကို right click နှပ်တော့ msiexec ဆိုတဲ့နံမည်ရှိတဲ့ file ဆီကိုရောက်သွားတယ်...။ အဲဒီ file က my document ထဲကနေပြီးတော့မှဝင်ရတာ...။ Kaspersky နဲ့လဲစစ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ...။ Kaspersky ကတော့ မိတော့မိတယ်ဗျ...။ ဒါပေမဲ့ ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး...။ funny ဆိုတဲ့ file ကလေးက destop ပေါ်မှာရှိမြဲရှိနေတယ်...။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့လို့...။ ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ ကျေးဇူးအမြဲတင်လျက်ပါ...။ ကျွှန်တော်အကိုစက်မှာဖြစ်တာမှိ့ ကျွှန်တော် အဲဒီ virus ကိုရှင်းပေးရမှာပါ...။ ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါ...။
2 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 30th May 2009, 9:20 pm
Hey bro...Forum helper ဘီလူး Advise your problem at there
3 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 31st May 2009, 3:44 pm
ဟုတ်ကဲ့မရဘူးဗျ...။ registry editor ကိုခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...။ run
ထဲကနေ regedit လို့ရိုက်ပြီးတော့ဝင်တာပဲ...။ Registry editor have been
disable by Adminstrator ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်...။
အဲဒါဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး...။ နောက်ပြီးတော့ msi.exe ဆိုတာလေးလဲပါတယ်...။
Test manager မှာအလုပ်လုပ်နေတာက update.exe နဲ့ msi.exe
ဆိုတာလေးနှစ်ခုပဲ...။ အဲဒီနှစ်ခုစလုံးကို end process လုပ်ပြီးတာနဲ့
သူဟာသူပြန်ပြီ run လာတယ်...။ အမြန် end process လုပ်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီနှစ်ခု
run တဲ့နေရာက msiexec ဆိုတဲ့ ကောင်ကို delete လုပ်ရတယ်...။ အဲဒါမှ
ပြန်ပေါ်တော့တာ...။ အခုအကိုဘီလူးပြောသလိုလုပ်ဖို့က register editor
4 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 31st May 2009, 8:43 pm
အဲဒီ့ register editor ကို ပြန်ခေါ်လို့ မရရင် ဒီအောက်က နည်းလေးနဲ့ ပြန်ဖော်ကြည့်ပါဦးဗျာ ..group policy ကနေပြီးတော့ ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါဦး....
Start => Run => gpedit.msc => User Configuration => Administrative Templates => system
အဲဒီ အဆင့်ထိ ၀င်ပြီးသွားရင် ညာဘက်ကလေးမှာ Pervent Access to registry editing tools
ဆိုတာလေး ရှိလိမ့်မယ် .. အဲဒါကို double click (r-click - properties ဆိုလဲ ရပါတယ်..)
ကလေးပေးပြီးတော့ enabled ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင်တော့ apply , ok ပေးကြည့်လိုက်ပါ .....ပြီးရင် group policy ကိုိ ပိတ်လိုက်ပါ ...ပြီးရင်
register editor ကို ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါ ... မရရင်သေးရင်တော့ ...
စောစောက လမ်းကြောင်းအလေးတိုင်းပြန်ဝင်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် စောစော က enabled ပေးထားတဲ့
နေရာလေးမှာ not configured ပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ ... ပြီးရင်တော့ regedit ကို ပြန်ခေါ်လိုက်
ပေါ့ ... အဆင်ပြေပါစေ ...
5 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 1st June 2009, 5:24 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 2110
တညျနရော : Outside the box.
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-03-09
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 175
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 109425
Registry Editor ကို ခေါ်လို့မရရင်
regedit.exe ဆိုတဲ့ file လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါ... (Windows ထည့်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်း အောက်မှာ ရှိပါတယ်)
file name ကို regedit.com ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းလိုက်ပါ...
Run ထဲကနေ နဂိုရိုက်နေကျ... regedit နဲ့ ခေါ်လိုက်ရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
မရခဲ့ရင်လည်း.. အဲဒီ့ .com ပြောင်းထားတဲ့ file လေးကို D-Click နှိပ်ပြီးတော့ သွားလို့ရပါတယ်..
6 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 3rd June 2009, 7:45 pm
အကိုတို့ဗျာ...။ ကျွှန်တော်လေ register ကိုတော့ပြန်ခေါ်လို့ရပါပြီ...။ဒါပေမဲ့ file ကိုတော့ဖျက်လို့မရဘူး...။ ဘာဖြစ်လို့လဲတာမသိဘူး...။ နောက်ပြီးတော့ virus ၀င်သွားတုံးက stick ထည့်လိုက်တော့အဲဒီထဲက file လေးတစ်ဖိုင်က (******.dll)ဆိုပြီးတော့ပြင်သွားတယ်...။ ဘာလို့လဲမသိဘူး...။ အဲဒါပြန်ပြင်လို့လဲမရတော့ဘူး...။ ဖိုင်ကတစ်ခုထဲဖြစ်တာ....။ ပြီးတော့ဘာနဲမှစစ်လို့မရဘူး...။ အဲဒါဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး...။ တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပေးပါလား...။
7 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 3rd June 2009, 8:45 pm
အစ်ကိုရေ...Virus ကို Upload သာတင်ပေးလိုက်တော့...တစ်စိတ်မဟုတ်ဘူး..တစ်လုံးလုံးကို ကြည့်ပြီးပြောပေးမယ်...
8 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 6th June 2009, 5:28 pm
အကိုရေ...။ Upload တင်ပေးဖို့နေနေသာသာ... ကျွှန်တော် stick ထဲကိုတောင်ပြန်မကူးရဲဘူး...။ ပြန်ပေါ်လာမှာဆိုးလို့...။ Cyber မှာရှိတဲ့ဟာကိုတင်မလို့လုပ်ကြည့်ပါသေးတယ်...။ ဒါပေမဲ့ Cyber ကဘာတွေလုပ်လဲမသိဘူး...။ အဲဒီစက်ကိုဘယ်သူ့ကိုမှမကိုင်ခိုင်းတော့ဘူး...။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပါ...။ အခုဖြစ်တာက virus ကိုသတ်လို့မရတာတစ်ခုပဲ...။ Virus run တာတွေ့ကိုတော့ရပ်နိုင်ပြီး...။ ဒါပေမဲ့ file လေးတစ်ခုကို click နှပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ run တယ်ဗျ...။ အဲဒါ run နေတုံးက လုပ်လိုက်တဲ့ file လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်...။ ကျွှန်တော်ညမှပြန်လာပြောပြပါမယ်...။ အခုတော့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်နော်...။
9 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 6th June 2009, 5:43 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 172
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-05-19
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 14
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1720
The name of virus is Funny virus.
ကျနော် ERD Commander လေးတင်ပေးမယ် system file repair function လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ
ERD commander က password recovery တစ် ခု ထဲမဟုတ်ပါဘူ။file recovery function တွေလဲပါပါတယ်။
[You must be registered and logged in to see this link.]removal
tools link လေး ပါ။ run ပြီးရင် process ကိုအရင် kill ပါ။ (သတိrun box
ထဲမှ explorer.exe msconfig.exe cmd.exe regedit.exe
gpedit.exeလုံးဝမခေါ်ပါနဲ့ )။ registry path
အဲဒီ၂ခုက registry repair နဲ့folder options တွက်ပါ။
[You must be registered and logged in to see this link.] ဒါလေး download လုပ်ပြီး start up ထဲက msi.exe လား update.exe လား remove လုပ်လိုက်အုံးနော်
ဖုန်းနံပါတ်က သရက်မြိုဗျ .. ဒါ သရက်မြို့ဟက်ကင်းဒေးရေးတဲ့လူလားမသိဘူး ..ဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်
I got this information from my friend. Try this.
Post By Mysteryzillion
10 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 7th June 2009, 2:46 pm
ဟုတ်ကဲ့...။ ကျွှန်တော်ဟာကျွှန်တော်လုပ်လိုက်တာအဆင်တော့ပြေသွားပါပြီ...။ အကိုပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့ တော့မစမ်းလိုက်မိဘူး...။ .dll ဖိုင်ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့ name မှာက .exe နဲ့ဖြစ်သွားတာတွေက မူလဖိုင်ကို virus က hidden လုပ်ထားတာဗျ...။ အဲဒါကျွှန်တော် hidden ဖိုင်တွေနဲ့ပြန်လုပ်မှရတော့တယ်...။ အဲဒါရှင်းသွားပြီ...။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်...။ Destop & My computer ထဲက system file လေးကိုတော့ဘယ်လိုမှ delete လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...။ ဘယ်လို delete လုပ်ရမလဲမသိဘူး...။ Virus စ၀င်တုံးက hidden file ဖော်လို့မရဘူး...။ register ခေါ်လို့မရဘူး...။ အဲဒါတွေဖြစ်တယ်...။ အော်ဒါနဲ့လေ run ထဲကနေပြီးတော့မှ recent ကိုလဲခေါ်လို့မရဘူး...။ အဲဒါဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲမသိဘူး...။ အဲဒီကစ္စနှစ်ခုပြီးရင်ပြတ်လောက်ပြီထင်တယ်ဗျ...။နောက်ထပ် error ထပ်တက်ရင်လဲပြောပြပေးပါမယ်...။ ကူညီကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်....။
11 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 30th July 2009, 8:52 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 266
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-03-16
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1658
File location ကို သိမယ်ဆိုရင် command prompt ထဲကနေပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ပြီးဖျက်ကြည့်
ပါလား.........run ထဲမှာ cmd ဆိုပြီးရိုက်......ပြီးရင် .........file ရဲ့location ကိုသွားပြီး တော့
attrib -s -h -r filename ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါလား.............ပြီးမှဖျက်ကြည့်လိုက်လေ.......
12 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem] on 31st July 2009, 8:37 am
ဒါပေမဲ့ တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်...။ Destop & My
computer ထဲက system file လေးကိုတော့ဘယ်လိုမှ delete
လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...။ ဘယ်လို delete လုပ်ရမလဲမသိဘူး...။
unlocker software လေးသုံးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ
အဆင်ပြေပါစေ[You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: ကူညီပေးကြပါဗျာ...။ [Problem]